Ulaxaze umsebenzi 'odlwengule' isiguli - Ilanga News
Home Izindaba Ulaxaze umsebenzi ‘odlwengule’ isiguli
Ulaxaze umsebenzi ‘odlwengule’ isiguli
Uvele enkantolo imantshi yasichitha isicelo sebheyili
UVELE enkantolo unesi wesilisa uPhilasande Khumalo osolwa ngokudlwengula intombazane enemi-nyaka ewu-17 ubudala phakathi emtholampilo eHammarsdal
UGCINE elaxaze umsebenzi, wazi-nikela emaphoyiseni unesi wesilisa, ILANGA langoLwesine elibike ukuthi usolwa ngokudlwengula isiguli (17) emtholampilo waseHlengisizwe, eHammarsdale.
UMnu Philasande Khumalo (31) waseNewcastle – kodwa obesehlala eHammarsdale ngenxa yomsebenzi – ubevele eNkantolo yeMantshi yaseHammarsdale ngoLwesi-hlanu ngaleli cala asolwa ngalo lokudlwengula le ntombazanyana eyayisemtholampilo ngoMsombuluko odlule ihamba nonina.
Imantshi, uMnu SS Zuma, isichithile isicelo sebhe-yili kaMnu Khumalo, icala yalihlehlisela umhla ka-27 kuNhlaba (May). Iveze ukuthi inkantolo inobufakazi obuqinile ngaleli cala.
Ngesikhathi engena ebhokisini labasolwa uMnu Khumalo, unina wesisulu – esingeke simdalule ukuvi-kela indodakazi yakhe – uvukwe wumunyu, wahluleka wukuzibamba, wasidinda isililo. Kuze kwaphoqeleka ukuba imantshi imbuze ukuthi uzokwazi yini ukuqhubeka nokuhlala enkantolo noma uzophumela ngaphandle.
Emuva kokuba imantshi iveze ukuthi icala iya-lihlelisa futhi umsolwa aka-yitholi ibheyili, unina we-sisulu uphu-me esehleka yedwa.
Ngesikha-thi ummeli kaMnu Khu-malo emce-lela ibheyili, ufunde incwadi efu-ngelwe esa-yinwe ngu-msolwa eve-za ukuthi usesulile emsebenzini kanti unomuzi awukhokhelayo, uhlala kuwona nezingane zakhe azifundisayo futhi uhlala nonina wazo.
Odabeni lwangoLwesine kuvele ukuthi isisulu sehlelwa yilo mhlola nje, besihamba nonina noyise obebaphelezele. Kuthi-wa umsolwa wabiza isisulu sime kulayini wokuyo-landa amakhadi emtholampilo, ezitshela ukuthi si-hamba sodwa. Unina wengane wabalandela kwa-thi uma kufikwa egunjini likaMnu Khumalo, we-thuka uma esebabona bobabili.
Wabuza kunina wengane ukuthi ufunani ngoba akambizanga. Wamphendula ngokuthi bahamba bobabili futhi yindodakazi yakhe le ayibizile. Kwa-bikwa ukuthi unina wesisulu wathi uMnu Khumalo wacela ukukhuluma nengane eceleni ngoba kune-zinto afuna ukuyibuza zona abona ukuthi ngeke ikwazi ukuphendula kahle uma kukhona unina.
Unina wengane uthi akazange axwaye, wenza njengoba ecela umsolwa, waphuma waya kwelinye igumbi eyolanda amaphilisi akhe. Wahamba imizuzu ewu-20 wabuyela egunjini likaMnu Khumalo sekukhiyiwe kodwa kuzwakala ukuthi kukhona abantu ngaphakathi.
Previous articleUdutshulwe wafa usomabhizinisi odumile
Next articleUsinde engozini umculi kamaskandi